♥♥♥လမင်းငယ်♥♥♥: မြန်မာ FLASH သီချင်းများ >>>>>>>>
မြန်မာ FLASH သီချင်းများ >>>>>>>>
♦ မြန်မာ FLASH သီချင်းများ ♦♦
စာရေးသူ/ လမင်းငယ် /နေ့စွဲ/ Sunday, October 02, 2011
▼ Oct2- Oct9(33)
၀ဋ္ဋ်ကြွေးများ ရှိရင် ကျေပါစေ
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ရေ ပျင်းနေရင် ဒီမှာလာပြီး တီးဖို့ ...
ငါးပါးသီလနှင့်+ အကျိုးဆက် များ
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး အနက် အဓိပ္ပါယ်>
<ကျေးဇူးတင်တဲ့ စိတ်နဲ့ နေကြည့်ပါ.
ဒါလာ နင့်ပြောခဲ့တဲ့ အချစ်ဆိုတာ>
အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပါ + အကျိုးရှိအောင်သုံးပါ>>
ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်သူပို ရက်စက်လဲ?
ကုန်ဈေး နှုန်းနဲ့ လစာ
ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်သူပိုမြတ်လဲ???
မြန်မာ မိန်းကလေးဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့ >
အွန်လိုင်း အရှုပ်တော်ပုံနှင့် ချက်တင်လောက>
ပေးတိုင်း မယူပါနဲ့ >>
လမင်းကို အချိန် တိုင်း နှိပ်စက်နေတဲ့ သူ ဘယ်သူဖြစ်မ...
ဒီနေ့ တွေးချင်းရာလျှောက်တွေးမိတော့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ် နိုင်ငံရေး ယောင်ယောင် ဟိုဟာ ယောင်ဒီဟာယောင်ယောင်နဲ့ယောင်ယော...
နေ့ သစ် များ ဆီ သို့ ♥♥♥♥♥♥
အတိတ်, အပေါစား ရုပ်ရှင်တွေက အတိုင်း ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေ ကို နောက်ကြောင်းမပြန်တော့ဘူး အသစ်အသစ် တွေကိုပဲ ငါကြို...
မင်္ဂလာပါ ရှင် ......... လမင်း နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ ရေးချင်နေလို့ စာအုပ်နည်းနည်းရှာဖတ်နေရလို့ စာမရေးဖြစ်တာပါ။ အတော်လေးကိုများလိ...
တမ်းတမိတယ် တစ်ချိန်က စိမ်းစိုနေတဲ့ ရွာငယ်လေးရယ် . အိမ်အိုလေးနဲ့ ဆီမပြည့်တဲ့ မီးခွက်ငယ်ရယ်. . အဟာရ မပြည့်စုံတဲ့ ထမင်းဝ...